ယေဘူယျတော့ပူပန် Disorder | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
Generalized တော့ပူပန် Disorder ပုံမှန်စိုးရိမ်စိတ်ထက်တန်ခိုးကြီး. လူတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုဖြစ်ပျက်သောအခါမူကားစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ရောဂါဖြစ်လာ.
ထွေအုပ်အထွေထွေတော့ပူပန် Disorder အဘို့အမျိုးဖြစ်ပါသည်. သငျသညျထွေအုပ်ရှိပါက, သငျသညျအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရတယ်. စိုးရိမျအာရုံကြော feeling ကလူအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်မတိုင်မီရနေသည်. လူအများစုဟာတစ်ခါတစ်ရံဒီခံစားချက်ရှိ. သို့သော် အကယ်. သင်ဤနည်းလမ်းအချိန်အများစုကိုခံစားရလျှင်, သင်ပြုမဆိုအရေးကြီးသောအရာများကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်, သငျသညျထွေအုပ်ရှိစေခြင်းငှါ.
သငျသညျကိုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များသွားကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ (ပါတီများက, အလုပ်, ကြောငျး, စသည်တို့ကို)
သင်ကျော် obsessive မဟုတ်ရန်အသုံးပြုသောအရာတို့ကိုကျော် obsessive စတင်စေခြင်းငှါ. သင်တဦးတည်းအရာအပေါ်အလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်းသည့်အခါအစွဲအလမ်းကြီး. ဥပမာ, သင်သည်သင်၏လက်ကိုဆေးဖို့အားလုံးကိုအချိန်ရှိသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပေမည်. သို့မဟုတ်သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သောသတင်းအတွက်အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ဆိုးရွားခံစားရပေမည်.
သင်တစ်ဦးစိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံကိုခဲ့ကြ. ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုခုကိုသင်ဖွစျသှားတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကစိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသားကောင်အတွေ့အကြုံရှိအကြမ်းဖက်မှုများရှိခဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ကြသည်
ရှိသမျှသည်အခြားသောစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလိုပဲ, သငျသညျထွေအုပ်အဘို့အကူအညီတောင်းရနိုင်. အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးပြည်သူ့ထွေအုပ်ပြီ, ထိုသို့အချိန်မရွေးစတင်နိုင်ပါသည်. သငျသညျစိုးရိမ်စိတ်အချိန်အများစုမှာရှိပါက, ဆရာဝန်တစ်ဦးထံမှအကူအညီကိုရှာ.